TRF na Foundation 2018 Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ, Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home TRF na Press 2018
Ndị nta akụkọ ahụ achọpụtawo Ụgwọ Ụgwọ Ọrụ ahụ ma na-agbasa okwu gbasara ọrụ anyị gụnyere: klas ịmara ịlụ ọgụ; akpọ maka irè, ụbụrụ dabeere n'ụmụ nwoke na ụlọ akwụkwọ; mkpa maka ọzụzụ maka ndị na-ahụ maka nlekọta ahụ ike na NHS maka ịṅụ ọgwụ ọjọọ na onyinye anyị research na mmekorita nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ. Peeji a gosiputara ihe ịga nke ọma anyị na akwụkwọ akụkọ na ntanetị n'oge 2018
Ọ bụrụ na ị hụrụ otu akụkọ na-egosi TRF anyị etinyebeghị, biko zigara anyị akwụkwọ edemede banyere ya site na iji akara kọntaktị na ala nke ibe a.
10 Disemba 2018. Na mbido December 2018 otu TRF gara Budapest na Hungary ebe Mary Sharpe gosipụtara na "Mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Intanet na Ahụike na Mmekọrịta" na ogbako "Trazụ ahịa mmadụ na Hungary: Nsogbu Ugbu A na Ọdịnihu na Omume Kasị Mma - Mmetụta nke Onlinewa N'ịntanetị ”. ''AZ INTERNETS AZA NTỤTA AHỤTA AZ EGYENNRE ES A TÁRSADALOMRA ', Budapest, 3 December 2018.
Enwere ike ịhụ ọkwa zuru oke Ebe a.
26 August 2018. Mary Sharpe nyere ọkachamara ọkachamara banyere ikpe a dị mwute na ikpe ndị Scottish. Ihe edemede nke Vic Rodrick dere. Page 10 na 11 na mbipụta mbipụta.
ONYE onye na - agbanye obi na - eche ihu n'ụlọ mkpọrọ maka ịchọta ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ na - enweghị ike ị kpọtụrụ ya site na mgbasa ozi.
N'ọnọdụ Scotland nke kasị njọ n'ịgba ọhịa n'Ịntanet, Gavin Scoular jiri Facebook, Snapchat na Skype bụrụ ndị enyi ha.
Nwa nke 23 ga - amalite na mkparịta ụka na-adịghị ọcha - mgbe ụfọdụ maka izu - iji merie ntụkwasị obi ụmụ agbọghọ ahụ tupu ha amanye ha ka ha zitere ya foto foto mmekọahụ.
O meziri ha ka ha zute ya site n'itinye egwu n'itinye foto na ntanetị 'ka ụwa niile hụ', tupu ha emegbu ha ma rafuo ha.
A mara ya ikpe na Thursday nke raping ụmụ agbọghọ ise - gụnyere ndị isi atọ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'oge ahụ.
Ndị juri na Ụlọikpe Kasị Elu dị na Livingston kwetwara ya na o nwere mmejọ ndị ọzọ iri, gụnyere mwakpo mmekọahụ, na-ewere ihe efu na-enweghị nkwenye ma na-atụ egwu ikesa foto.
N'ime ubochi nke itoolu, ndi na-akwado kwadoro Stephen Borthwick, na-eme mkpesa, choputara Scoular 'onye na-azu ahia' ma kwuo na ndi akaebe nyere ihe omuma banyere ihe o mere. Ọ gbakwụnyere, sị: 'Ọ na-akwa ha. Gavin Scoular nwere mkparịta ụka n'arụ ụka na ha maara nke ọma na ha nọ n'okpuru afọ 16, n'okpuru afọ nkwekọrịta.
'Ọ gwara ha niile ka ha gosi ya ihe osise ha. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ gwara ha ka ha zigara ya foto.
'O jiri ihe oyiyi a mee ihe iji chịkwaa àgwà ha, iji mee ka ha mee ihe ọ chọrọ. Na nke ọ bụla, ọ gara na nzukọ ụmụ agbọghọ ahụ. Site na nkwenye nke onwe ya, o zutere ha maka otu ihe kpatara ya - na-eme omume rụrụ arụ na-akwadoghị. '
Otu onye azọrọ na ọ bụ 13 mgbe Scoular, si Niddrie, Edinburgh, kpọtụrụ ya. Ọ nabatara ya na ozi na-arịwanye elu na-arịọ ya tupu ya agwa ya ka o zipu ya foto nke onwe ya.
O kwuru, sị: 'Ekwuru m na ọ dịghị ngwa ngwa ma ọ nọgidere na-arịọ ma na-arịọ. Agwara m ya na achọghị m ma m zigara ya foto mgbe m bụ 14. Amaghị m ihe mere.
'Mgbe m zigara ya onye mbụ ọ tụrụ egwu na ọ ga-etinye ya n'usoro mgbasa ozi.
'Ọ gwara m ma ọ bụrụ na anaghị m ezitere ya foto ọzọ ọ ga - eziga foto ọ na - enwe na Facebook.
'O mere ka m chee na m ga-eme ya. Achọrọghị m ụlọ m niile na Facebook.
'Mgbe m zipụrụ foto nke abụọ ọ rịọrọ mgbaghara maka ikwu na ọ ga-etinye foto ahụ na Facebook, n'ihi ya, agbaghara m ya.'
O kwetara ịga ụlọ nke Scoular, ebe ọ raara ya n'ike.
O kwuru, sị: 'Achọrọ m ịkwa ákwá ma m debere ya niile. Naanị m chọrọ ịpụ n'ebe ahụ ozugbo m nwere ike. Agwara m ya na o merụrụ ahụ. Agwara m ya ka ọ kwụsị. Ọ ka na-aga. '
Onye ọzọ ogbugbu bụ 14 mgbe Scoular kpọtụrụ ya site na kamera.
Ná mmalite, mkparịta ụka ha gbasara ihe ndị dị kwa ụbọchị, dịka akwụkwọ, ma ọ na-ekwu na ya ga-agha ụgha nye ndị enyi ya na ha enwee mmekọahụ ma ọ bụrụ na o zitere ya foto efu.
O kwuru, sị Scoular na-ekpuchi ya ka ọ na-egbuke obi ya n'oge a na-akparịta ụka na Skype, ọ weere ihuenyo
'Achọrọ m ịkwa ákwá. Ụjọ tụrụ m. Agwara m ya ka ọ kwụsị '
gbara. Iji foto dị ka mkpuchi, ọ na-amanye ya izute ya n'akụkụ Ocean Terminal na Leith ma na-awakpo ya n'ụzọ mmekọahụ.
Ntakịrị onye nke nta nke onye ọgbọ bụ nanị 12 mgbe ọ kpọtụrụ ya site na mgbasa ozi ọha na eze ma mee ka o zute ya. Ha na-aga ije na Portobello Golf Course, ebe o susuru ya ọnụ na-akwagide ya - n'agbanyeghị na ọ maara afọ ndụ ya.
Ọ gwakwara ndị mmadụ abụọ o mere ka ọ bụrụ onye nchebe na ọdọ mmiri ọdọ mmiri, na-akụziri ụmụaka ka igwu mmiri.
Ndi ozo choro na ya bu "ndi ezoro ndi mmadu" na ndi choro ihe ojoo banyere ya. O kwuru na ha niile kwenyere na mmekọahụ.
O kwetara na n'oge mmejọ ahụ, n'etiti 2010 na 2014, ọ 'na-enwe mmasị mmekọahụ n'ebe ụmụ agbọghọ nọ' ma ugbu a, ọ dị 'egwu' banyere ya.
O kwuru, sị: 'Enweghị m obi ụtọ banyere ihe m mere. Ma, amaara m ihe m meworo, ihe m mere adịghịkwa njọ. '
N'abalị ikpeazụ, Mary Sharpe, bụ onye isi nchịkọta mgbasa ozi nke Òtù Maka Ụgwọ Ụgwọ, dọrọ aka ná ntị na ịnweta na enweghị aha - 'ihe nzuzo' - nke mgbasa ozi mgbasa ozi kwere ka ejiji n'ịntanetị ghọọwanye ihe.
O kwuru, sị: 'Ọ dị mfe ịmịnye onye nwere okwu ịhụnanya na obi ụtọ n'ịntanetị. Ọ bụrụ na nwa okorobịa rịọrọ maka foto, ọ dị mfe izipu foto. '
Ms Sharpe kwukwara na ndị ọkachamara dị ka Kim Kardashian na-eme ka ndị ntorobịa chee na ọ bụ ihe dị mma ka ha nwee mmekọahụ.
O kwuru, sị: 'Omenala anyị bụ maka igosipụta ahụ gị, ọ bụkwa ihe na-eme ka mmadụ nwee ụdị ndụ ahụ a ma ama ha na-eme. Ọ bụ ọdịbendị ka ukwuu. a hụrụ na inwe mmekọahụ bụ ihe a na-ahụkarị na ọha mmadụ taa ma ọ na-eme ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịchọta ụmụ agbọghọ. Ọ bụ ọdịbendị nke na-eme ka ha na-eji ejiji na-enwe mmekọahụ. '
Ndị isi obodo chere ihu na 132 maka ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ. Ndị omekome lekwasịrị anya na ihe kachasị njọ ma na-ekpe ikpe na-eche nsogbu 100 ihu. Mgbe ndị akaebe ahụ nwere
nyere ha akaebe, Scoular rịọrọ ya ebubo na ebubo ya na-eyi nwa agbọghọ 12 afọ, na-enwe mkparịta ụka n'Ịntanet na nwa agbọghọ 14year site Skype ma na-achọ ka ọ zitere ya ihe oyiyi na-adịghị mma.
O kwetakwara mmejọ isii metụtara mmekọahụ na-agụnye ejiji ma nwee nwa agbọghọ 14 dị afọ iri na ụma. N'elu Ụlọikpe Kasị Elu na Thursday, a mara ya ebubo ebubo asaa nke ịkatọ mmadụ ise ahụ mgbe 'ejiji' ha na mgbasa ozi.
Ndị juri ahụ chọpụtakwara na ọ mara mmebi iwu mmebi iri ọzọ, gụnyere omume rụrụ arụ na omume rụrụ arụ na ụmụaka na-ezukọta maka mmekọahụ na-akwadoghị.
Mgbe ikpe ndị ikpe mara ọ pụtapụtara na Scoular na-eje ozi n'ogo ikpe anọ na iri abụọ, nke e nyere na 2014, maka mmejọ ndị yiri nke ụmụ agbọghọ abụọ.
E tinyewo aha ya nye ndị omempụ na-eme ihe ọjọọ maka afọ iri.
Onyeikpe Onyenwe anyị Summers kwụsịrị ikpe ruo September 19 na Ụlọikpe Kasị Elu na Edinburgh.
Ọ dọrọ aka ná ntị sị: 'I kwesịghị iche na ị na-ele anya n'ogologo oge ikpe.'
A ga-edebanye akwụkwọ ndị omekome na ndị na-emejọ nwoke ma ọ bụ ndị na-akwa iko ma gbaa ya mkpọrọ.
25 July 2018. Mark Blunden, onye na-ede akụkọ akụkọ na Teknụzụ nyere ezigbo mkpuchi na wardgwọ Ọrụ andgwọ na nsogbu erectile na-akpata peeji nke 11 nke London Evening Standard. E nyekwara ya Akwụkwọ akụkọ Naijiria.
16 July 2018. Kay Smith amaghachiri akwụkwọ ozi Mail na Sunday maka The Times.
15 July 2018. A gbara Mary Sharpe ajụjụ na ndị Scottish Mail na Sunday banyere ọdịnaya nke akwụkwọ maka ụlọ akwụkwọ praịmarị bụ The Reward Foundation. Page 21. Ihe di iche iche nke isiokwu di Ebe a.
15 July 2018. Mary Sharpe dere mpempe akwukwo a zuru oke. Page 38.
15 July 2018. Ihe odide mbụ pụtara na Scotsman dị na peeji nke 7 ma nwee ike ịhụ ya online (ịdọ aka na ntị: onyonyo nwere ike ịkpalite). Ejiri Tax Free Insider bulie edemede ahụ.
4 July 2018. A gbara Mary Sharpe na Darryl Mead ajụjụ maka SecEd, bụ isi ụlọ ọrụ n'Ịntanet maka ụlọ akwụkwọ sekọndrị na UK. E nwere ike ịhụ ihe mbụ na mbụ Ebe a.
28 February 2018, a gbara Mary Sharpe ajụjụ ọnụ na ozi akụkọ ntanetị Spanish Tu Cosmopolis.
25 February 2018. Otu ederede Spanish nke buru ibu banyere mmetụta nke ikiri ihe gba ọtọ, ileba anya na-akpali agụụ mmekọahụ na-eji akụkọ banyere Gabe Deem, tinyere okwu sitere na Darryl Mead na Mary Sharpe, yana Gary Wilson na Dr Valerie Voon. Ihe zuru ezu dị Ebe a.
Akụkọ a dịkwa online na Sunday Times.
Akụkọ a gbakwara akụkọ akụkọ Scottish Financial News na 24 January 2018